ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီး ဟောကြားတဲ့ “မြန်မာပြည်က လူတွေ မညီညွှတ်ရခြင်း အကြောင်း” – Lat Khat Than
ပါချုပ်ဆရာတော်ကြီး ဟောကြားထားခဲ့တဲ့ တရားတော်တွေထဲမှ မြန်မာပြည်က လူတွေ မညီညွှတ်ရခြင်း အကြောင်းကို ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
တလောက ဘုန်းကြီးရန်ကုန်သွားတော့ “Mahachulalongkorn University”က ပါမောက္ခအဆင့် နိုင်ငံခြားသား အမျိုးသမီး တယောက်က ဘုန်းကြီးကို ဘာမေးတုန်းဆိုတော့-
“အရှင်ဘုရား မြန်မာပြည်မှာ မြန်မာတွေမညီညွတ်ဘူး”လို့ကြားတယ်တဲ့ ဘုန်းကြီးက ” အေး ဟုတ်တယ် ” လို့ . . .
သူက “ဘာကြောင့်လဲ “တဲ့ . . .ဘုန်းကြီးက ” ဘာကြောင့်မှ မဟုတ်ဘူး ” လို့ “တို့ လူမျိုးတွေရဲ့ သွေးသားကြောင့် ဖြစ်တာ”လို့ ဖြေလိုက်တယ်..
“မြန်မာလူမျိုးတွေဟာ one man show နဲ့ hero တွေချည်းပဲ”လို့ အကုန်လုံး.. “တကယ့်သူရဲကောင်းတွေပဲ”လို့ မြန်မာပြည် က လူတွေက..ဘယ်ကိစ္စပဲလုပ်လုပ် one man show တကိုယ်ကောင်း လုပ်ကြတယ်။ စုပေါင်းလက်တွဲလုပ်တဲ့အကျင့် အင်မတန်မှ အားနည်းတယ်။ သူ့ထက်ငါသာဖို့အတွက် ကြိုးစားကြတယ် one man show ပေါ့။ တစ်ယောက်ထဲ ကောင်းတာ ကိုပြချင်တယ်။ အဖွဲ့အသင်းနဲ့ အောင်မြင်တာကို မလိုချင်ကြဘူး။ တယောက်ထဲပဲ လုပ်ချင်ကြတယ်..
“တို့ဆီမှာက heroတွေများတယ်”လို့ အဲဒီလို ဖြေလိုက်တော့ သူက ရယ်နေတယ်။ ဟုတ်တယ် ဒါဟာ မြတ်စွာဘုရားရှင် ကိုယ်တော်တိုင်ကလည်း ညီညွတ်မှုကို အလေးထားခဲ့တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံ လွတ်လပ်ရေးရပြီးနောက် ပထမဆုံး ပြည်ထောင်စု သမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံတော် တည်ထောင်တဲ့အချိန်မှာ နိုင်ငံတော်တံဆိပ်ထဲမှာ ဘာပါသလဲဆိုတော့ “သမဂ္ဂါနံ တပေါ သုခေါ ” ဆိုတဲ့ စာတန်းလေးပါတယ်နော်။ အဓိပ္ပာယ်က . . .”ညီညွတ်သူတို့၏အကျင့်ဟာ ချမ်းသာကြောင်းဖြစ်တယ် “တဲ့..ဒါပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာ အဲဒီစာတန်းဟာ ပျောက်ပျက် သွားပြီ မရှိတော့ဘူး..
ဒီတော့ တို့ဆီမှာ ညီညွတ်မှုဆိုတာ လိုတာအမှန်ပဲ.. ဒါပေမယ့် လူတွေက “နာနဆန္ဒ နာနက္ခန္တိတာ” “စိတ်ဆန္ဒချင်း ဟာ မတူညီကြဘူး” “အတွေးတွေဟာ မတူကြဘူး”..မတူတဲ့အတွေးတွေကို ပေါင်းစပ်ထားဖို့ရာ အတော်ခက်ခဲပါတယ်.. “one man show” “hero”ဆိုတဲ့ စိတ်ဓာတ်တွေ ရှိနေလို့ကတော့ ပိုပြီးတော့ ခက်ခဲတာပေါ့.. ဒါကြောင့် ညီညွတ်မှဖြစ်မယ် ညီညွတ်ကြပါ . . .
ပါချုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး Dr.နန္ဒမာလာဘိဝံသ (ပညာဖြင့်အသက်မွေးခြင်းအကြောင်းတရားတော်)
ကဆုန်လပြည့်နေ့ အကြောင်း သိကောင်းစရာများ